Home YURUB IYO YURUB Hector Bellerin Story Story Plus Xogta Warka Xogta Leh
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full Story ee kubadda cagta ee ugu wanaagsan ee loo yaqaan Nickname; "Muusiko yar". Hector Bellerin Childhood Story Story plus plus Biography Factory wuxuu kuu keenayaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor inta caan ka ah, nolosha xiriirka, nolosha qoyska iyo waxyaabo badan oo aan caddayn-OFF-Pitch oo aan la ogeyn isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay awoodiisa degdegga ah, laakiin qaar ka mid ah tixgelin Hector Beller's Biography ee aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Hector Bellerin Story Story Plus Xogta Warka Xogta -Nolosha Hore
Héctor Bellerín Moruno wuxuu ku dhashay maalinta 19th ee March 1995 ee Barcelona, ​​Spain. Isagu waa cadad la xaqiijiyay markii uu dhasho. Hector wuxuu u dhashay Mr iyo Mrs Maty Moruno labadaba, Spanish iyo muwaadin reer Catalonia ah.
Héctor waxa uu bilaabay maalintiisa kubadda cagta ee Nidaamka Dhalinyarada Barcelona intii uu jiray da'da hore ee 6. Wuxuu ku qaatay sannadihii 8 barashada falsafada Barcelona ee weerarka, mana aheyn mid garabka midig.
Xitaa markii uu cunugey, Héctor wuxuu soo bandhigay qaab ciyaareedkiisii ​​fiicnaa iyo qaab ciyaareedkiisa weerarka intii uu joogay Barcelona. Dhowr jeer, wuxuu u codeeyay 'Man of the tournament' ciyaaraha isboortiga. Caankiisa ayaa ka kacay xNUMX Naadiga Canillas ee ku guuleysatay horyaalka Madrid halkaas oo uu ku guuleystay abaalmarinta tartanka koobka adduunka ee Zinedine Zidane.
Dhamaan taageerayaasha FC Barcelona waxay jecel yihiin Bellerín. Waxay ku farxeen in ay daawadaan isaga oo adeegsanaya isbedelkiisa difaacayaasha mucaaradka iyo sidoo kale si deg deg ah u socodka booska difaaca. Arsene Wenger ayaa ku farxay farxadooda.
sida Cesc Fabregas, Beller oo da 'yar oo qandaraas ah oo 16 ah ayaa laga saaray kooxda Arsene Wenger ee waqooyiga London. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Hector Bellerin Story Story Plus Xogta Warka Xogta -Nolosha Xiriirka
Hector Beller ayaa noloshiisa iyo banaanka garoonka ku soo galay isagoo xiiso u qabay tan iyo markii uu yimid England. Waxa uu ku jiray xiriir muddo dheer ah oo leh qaab ciyaareed qurux badan Shree Patel.
Hector iyo Shree Patel
Quruxda mugdiga ah ee madow waxay ku nooshahay London waxayna leedahay xididada Hindiya. Waxay u egtahay sida Calvin Klein iyo magaca isboortiska ee Ellesse iyo in ka badan 20k followers followers on account Instagram kaas oo loo yaqaan 'iamshree'.
Shree wuxuu ahaa qofka kaliya ee ka caawiyay Hector dagaalka cidlo markii uu yimid London isagoo ahaa wiil 16 wiil. Helitaanka xiriirka kaliya ee keli ah ka dib markii uu soo galo, Hector marnaba ma dareentin gabi ahaanba lumay oo kali ahaan magaaladan London.
Labadaba jecel inay jecel yihiin inay wadaagaan sawirada naftooda oo dhan oo jecel. Sawirka hoose ayaa la wadaagay suurtogalnimada ka dib marka galmo la sameeyo.
Hector iyo Shree, dhammaantood waa la jecel yahay.
Waqtiga tayada ee ku yaala xeebta ayaa runtii ah mid isku mid ah oo labada dhinacba wadaagaya. Taageerayaasha lama yaabi doono haddii ay dhawaan ku dhawaaqaan guurkooda.
Hector iyo gabar saaxiibka ah, waqtiga tayada kharashka badda
Hector Bellerin Story Story Plus Xogta Warka Xogta -A Lover Lover
Sida wiil 16-sano jir ah oo u soo guuray waddan shisheeye ah, Bellerín wuxuu noloshiisa England ka helay noloshii ugu fiicneyd. Wuxuu u baahan yahay caawinaad si uu wax uga qabto caqabadaha luuqada iyo habka tababarka adag ee akadeemiga Arsenal.
Noloshiisu waxay ahayd mid aad u qallafsan, mana jiraan waxyaabo badan oo ay sameyn karaan wakhti kali ah si ay uga carqaladeeyaan magiciisa. Iskudhicitaan waqti wakhti la qaato saaxiibkiisa, Hector wuxu ku siman yahay waqtigiisa oo dhan si uu u ciyaaro Wac Duty on PlayStation 4.
Hector- Taageerada CoD-da ee Dhimashada-adag
Fikrad ahaan, marka uusan jeexi karin garbaha midig ee Emirates, wuxuu si xeeladeysan u xeel dheeraa barta uu ku leeyahay konsalka PlayStation. Hoos waxaa ku qoran wareysigiisa oo ku saabsan Wicitaanka Dhacdada Duty.
Waxay ahayd ciyaartoyda U18s oo markii hore u soo bandhigay Call of Duty, iyo shan sano oo hoos loogu dhajiyay khadka uu ku xiran yahay cayaartii ugu horeysay ee fiidiyoow ah ee fiidiyaha. Bellerín wuxuu ku andacooday in labadii sano ee ugu horeysay ka dib markii uu bilaabay inuu ciyaaro ciyaarta, wuxuu ciyaari lahaa maalintii oo dhan tababarka ka dib.
Wareysi uu siiyay Qorraxda, Bellerín ayaa yiri sida soo socota. "Waa xeeldheer aniga ah. Ma helayo waqti badan oo aan ku ciyaaro, markaa marka aan la joogo saaxiibaday, inta badan aniga kaliya ma ciyaaro CoD. "
Asideed cod Cod iyo waqti la qaato la saaxiibkiisa, Hector wuxuu jecel yahay inuu daawado taxanaha filinka tv-ga ee eygiisa oo badanaa siinaya daawashada filimada oo dhan.
Hector iyo eygiisii ​​oo muujinaya dareenka dareenka filimka
Hector Bellerin Story Story Plus Xogta Warka Xogta -Wuxuu ka dhaqso badan yahay Theo Walcott
Tan iyo markii uu kooxda kusoo laabtay 2006, Theo Walcott wuxuu ahaa ciyaaryahanka ugu dhaqsiyaha badan Waqooyiga London. Bilowgii xilli ciyaareedkii 2014-15, wuu jabay Theo Walcott40-Mitir Rikoorka rikoorka Arsenal ee 1 / 100th ee labaad.
Theo WalcottRikoorka 40 waxaa uu ahaa 4.78 ilbiriqsi, laakiin xiddiga reer Spain ayaa sarre u qaaday xilli ciyaareedkii 4.77 ee 2015. Si kastaba ha ahaatee, wararku waxay soo jeedinayaan in Bellerín ay hoos u dhigtay wakhtigeedii 4.42.
Xaqiiqdii, daafaca Arsenal ayaa si dhakhso ah uga walwalsan yahay inuu xitaa awoodi karo inuu ka careysiiyo "Triple-Triple" Usain Bolt, oo ku guuleystay bilada dahabka ee 4.64, ayaa ku guuleystay bilada dahabka ee 40-mitir markii uu dhigay rikoorka adduunka ee kubadda cagta ee 100-mitir.
Iyada oo la ogeysiinayo internetka, Bellerín iyo Bolt labadaba waxay leeyihiin xitaa madadaalo leh iyagoo isku khilaafsan Twitter. Shaki la'aan, Hector waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu dhaqsaha badan caalamka.
Hector Bellerin Story Story Plus Xogta Warka Xogta -Ahaansho Garsoorka Dambe
Xilliga jiilaalka 2013, Arsene Wenger ayaa u diray da'yarka 18-da ah ee da'diisu ay aad u qiimeeynayso amaahda kooxda Watford. Waqtigaas ciyaaryahanka reer Spain kaliya wuxuu u saftay 8, taageerayaal badan oo Arsenal ah ayaana fahmi waayay sababta. Maadaama uu cadeeyay in dhalinyaradu aysan heli doonin daqiiqadaha uu u baahan yahay, Wenger ayaa dib u soo celiyay labo bilood ka dib.
Hector mar hore ayaa lagu xukumay si qalad ah Watford
Dhowr sano ka dib, Kabtanka Watford Troy Deeney ayaa na siiyay aragtida sababta keentay in qalinjabinta La Masia uu ciyaaray dhowr ciyaarood Vicarage Road. Waxa uu shaaca ka qaaday in tababaraha waqtigaas, Giuseppe Sannino, uu ka helay xiddiga reer Spain inuu yahay mid aad u fudud madaama uu taam u yahay islamarkaana uusan u ciyaarin inuu u ciyaaro kooxdiisa.
Hector Bellerin Story Story Plus Xogta Warka Xogta -Bedelka
Hase yeeshee, xajinkiisa iyo farsamadiisa kubada cagta ayaa laga yaabaa inay bixiso. Laakiin ka hor waqtigiisa London, Hector Bellerín wuxuu ahaa xiddig garabka uga ciyaara Barcelona. Waxay ahayd kaliya markii uu yimid Waqooyiga London oo lagu bedelay daafac buuxa.
Waxay ahayd Wenger isaga oo soo saaray wicitaankii kama dambaysta ah ee ku saabsan inuu u noqon lahaa daafac midig ama ma ahan. Tababaraha Faransiiska ah ayaa shakhsi ahaan u dhiibay kaaliyaha macalinka Steve Bould inuu helo mid ka mid ah hal kulan oo uu kula ciyaaro da'yarka si uu u fududeeyo inuu u wareego difaaca. Bould waa inuu barto sida looga hortago xoqida.
Maanta, Bellerín waxay u taagan tahay mid ka mid ah daafacyada ugu fiican dhallinyarada, ma ahan kaliya Premier League laakiin kubadda cagta adduunka.
Hector Bellerin Story Story Plus Xogta Warka Xogta -Kulliyad
2016, Hector waxaa lagu diiwaan geliyey koorso online ah oo ku yaal Jaamacadda Pennsylvania, oo ah iskuul ku yaala Philadelphia.
Beller waxay raadineysaa dibloomo suuq-geyn ah, waxayna daawataa muxaadarada internetka iyo sidoo kale dhamaystirto imtixaannada shabakada internetka ee dugsiga.
Wiilkan yar ayaa dhawaan qiray in uu helayo koorsada yaryar ee aadka u xiisaha badan, laakiin waxa uu ahaa qaabka koorsada uu ugu jecel yahay.
Hector Bellerin Story Story Plus Xogta Warka Xogta -Xaqiiqooyinka Tattoo
Hector Beller waxaa loo yaqaanaa xawaaraha uu ku socdo xariiqa, laakiin wuxuu sidoo kale ku helay farshaxanka jidhkiisa.
Xawaaraha Isbaanishka wuxuu leeyahay gabbaad buuxda oo hoos u dhacaya gacantiisa midig oo ay ku jirto sawirka Maryaniga Virgin ah oo dhererka dhererkiisa.
Hector mar ayaa yiri: "Waxaan haystay midkeygii ugu horeeyay, xayawaankeyga, awowgeyga ayaa mar walba u isticmaali jiray inay ii iibsadaan, laakiin sida iska cad aniga aanan la ciyaari karin sababtoo ah ma xiran kartid wax dahab ah"Sidaa darteed waxaan go'aansaday in aan helo tattooed. Waxaan u maleynayaa in aan ku dhawaaday 15 ama 16 markii aan qabtay, taasina waxay ahayd markii ugu horeysay.
Hector sidoo kale wuxuu leeyahay tattoo ah qoolley iyo calaamad qoys. Weyn 'Qoyska' waxay u taagan tahay ina-adeerka, awoowe, walaashay, hooyaday iyo aabe iyo grandad iyo inta kale ee beesha Beller. Hector, wax walbaa waa qoyskeyga.
Hector Bellerin Story Story Plus Xogta Warka Xogta -Nolosha Qoyska
Héctor Bellerín Moruno waxay ka timaaddaa asal ahaan heerka dhexe ee reer Catalan. Waalidiintiisa, oo loo yaqaan Maty Moruno waa Catalans. Waxay wiilkooda ku wareejiyeen FC Barcelona markay da 'yaryar yihiin 6. Maalgashiga kubbadda cagta ayaa tan iyo markii la bixiyay.
Beller ayaa mar uun iibsatay guri cusub oo London ku yaal, halkaas oo waaliddiinta laga filayo in ay degaan. Waxay ku noolaayeen London oo ku dhow Hector. Marar badan, wuxuu guri kale ka iibsaday Barcelona. Tani waxay timid markii ay soo baxday warar sheegaya in ay ka tagayaan Arsenal.
Hector Bellerin Story Story Plus Xogta Warka Xogta -Meelaha Zodiac
Hector Beller waxaa loo xaqiijiyay Nasteexo wuxuuna leeyahay sifooyinka soo socda ee shakhsiyadiisa;
Xoojinta Hector Beller: Naxariista, farshaxanka, maskaxda, qabowga, caqliga, muusikada. Hector Beller ee Tabar darrida: Cabsida, kalsooni weyn, murugo, rabitaan ah in laga baxsado xaqiiqada, waxay noqon kartaa dhibane ama shahiid. Waa maxay Hector Beller oo jecel: Kaligaa ah, hurdo, muusik, jacayl, warbaahin muuqaal ah, dabaasha iyo mawduucyada ruuxi ah. Maxay Hector Beller Jeceshahay: Aqoon-dhan-dhan, lagu dhaleeceeyay, soo noqnoqday ee soo noqnoqonaya ku soo noqnoqonaya iyo naxariis darrada nooc kasta.
Hector Beller xayawaanka duurjoogta ugu jecel: Waxa uu sheegay in xayawaanka uu jecel yahay uu yahay mujaahaadka maxaa yeelay wuu jecel yahay "Gaajo". Taas macnaheedu waxaa weeye in qofka reer Spain uu u baahan yahay rabitaanka cuntada ee ku haboon guusha.
Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada Hector Bellerin's Childhood Story iyo xaqiiqda bikradda aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!
Nacho Fernandez Storyhood Story Sheekooyinka dhabta ah ee aan la sheegin